Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Ny tantaram-pitiavan'i Fabian Delph ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny lalao Football izay fantatra amin'ny anarana; "Fabs". Ny tantaran-tantaran'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantara tsy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao nanomboka tamin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Ny tantaram-pianakavianay Fabian Delph dia mahaliana, raha tsy hafahafa - tantaran'ilay ankizilahy manetry tena izay avy amin'ny fianakaviana sarotra. Na dia nolavin'ny rainy aza i Delph dia nahazo tombontsoa tamin'ny talenta baolina kanto. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Ny tantaram-pianakavian'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Voalohandohan'ny fiainana
Teraka tany Fabian Delph i Fabian Delph 21st of November 1989 an-dreniny, Donna Delph ary ray iray tsy fantatra tany Bradford, Royaume-Uni. Nisaraka ny ray aman-drenin'i Fabian Delph fony izy mbola zaza.
Raha vao niteny tamin'ny mpanao gazety izy dia nilaozan'ny rainy i Poor Fabian fony izy zazakely.
Tany am-piandohana nandritra ny androm-piainany, ny rain'i Fabian dia nolazaina fa nandao azy rehefa mbola kely loatra izy mba hahatsiaro. Izany no nahatonga an'i Fabian, ny maman-dry zareo sy ny iray tam-po aminy dia mifindra any amin'ny tanàna maloto any ambanivohitr'i Bradford.
Ny fiantraikan'ny fanapotehan'ny ray aman-drenin'i Delph: Ny olona izay niaina tamin'ny alalan'ny fialan-tsasatry ny ray aman-dreny dia hahafantatra tsara ny alahelonao lalina ara-pihetseham-po mety hitranga. Izany, tsy misy fisalasalana, dia nanimba ny vokatra ara-psikolojika tamin'i Fabian sy ny iray tam-po aminy. Ny vokatr'izany dia hita mazava tsara tamin'ny fananganana ny asany.
Ny tantaram-pianakavian'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Reny manan-janaka
Ny renin'i Fabian, Donna Delph, no nanampy ny zanany hahita ny asany taloha. Ho an'i Fabian, tapaka ny fahabangana rehefa nisy baolina kitra teo amin'ny tongony.
Ny maman'i Fabian mena Donna dia mendrika tombontsoa be dia be rehefa nentiny niakatra izy ary nahatonga azy hitazona ny fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina. Tamin'izany fotoana izany, ny fianakavian'i Fabian Delph dia niaina tao amin'ny faritra mafy tao Bradford izay ahafahan'ny olona mivadika amin'ny fitaoman-dratsy izay azon'izy ireo.
Niroborobo, Fabian dia nanapa-kevitra mafy ny hahatanteraka ny nofinofiny tamin'ny baolina kitra ary ny faniriany ho lasa mpilalao baolina matihanina dia tsy hoe faniratsirana fotsiny. Amin'ny maha-zatovolahy azy, iray amin'ireo nofinofin'i Fabian dia ny hividy ny trano fonenany ho lasa mpanankarena.
Ny tantaram-pianakavian'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Avy amin'ny Grass to Grace
Ny renin'i Fabian Delph dia nahantra ary tsy nanam-bola ny akademia ary nanangona vola ho an'ny zanany sy ny fianakaviany. Izy dia madio kokoa izay nanangom-bola (£ 278 isam-bolana) izay tsy afaka mandeha na aiza na aiza.
Indrisy, i Donna Delph dia nanjary naniry ny fahombiazan'ny zanany ary tsy maintsy nanao hosoka tao amin'ny toeram-piasany. Nosintoniny £ 45,052 nihevitra fa mety ho voavidy izy io. Nampalahelo fa tafaverina izy ary tratra i Donna. Nomena fe-potoana am-ponja ny volana 12 volana ny mum-of-telo. Tena ilaina ny mahafantatra fa rehefa nanolotra ny hosoka i Donna tokana, dia efa nandalo fitsapana mitovy amin'izany izy. Nifarana tamin'ny Fitsarana tany Crownford tamin'ny volana 2007 izy.
Taorian'ny famotsorana azy, dia nody i Donna ho madio kokoa. Tatỳ aoriana, ny teti-dratsin'i Fabian Delph dia nahomby tamin'ny farany. Ny fianakaviana Fabian Delph dia nanao dingana vaovao satria nanomboka baiko ny baolina kitra. Nofaritan'i Fabian tamin'ny farany ny tranon'ilay renim-pianakaviana iray, ka nividy trano izy ary nanatanteraka ny nofinofiny tamin'ny fahazazany.
Ny tantaram-pianakavian'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Relationship Life
Tsy isalasalana fa ny baolina kitra dia baoritra volamena, toerana iray izay i Fabian Delph no nanalavitra azy ny fisian'ny fisaraham-panahin'ny ray aman-dreniny. Nahita fientanam-po koa izy tamin'ny fotoana nihaonany tamin'ny fitiavany ny fiainany, Natalie tao amin'ny 2013.
Teraka tamin'ny volana 31, 1990 (herintaona tanora noho i Fabian), tao Manchester City, Angletera i Natalie. Mpitambarotra mahomby izy, mpandraharaha ary mpampiasa vola be. Ny fifandraisan'izy ireo dia nitombo avy amin'ny sata tsara indrindra ho an'ny tena fitiavana izay nahatonga ny fanambadiana. Zava-dehibe ny mampahafantatra anao fa nanaiky ny hanambady any amin'ny fety manokana ny roa tonta tamin'ilay taona nifankahitany.
Fabian dia lehilahy manambady manambady ankehitriny. Roa taona taorian'ny fanambadian'izy ireo dia noraisin'ny mpivady voalohany ny zanany voalohany, zazalahy iray. Fantatry ny mpankafy i Fabian amin'ny maha ray be fiahiana azy.
Taorian'ny nahaterahan'ny zanak'izy ireo, narahan'ny teraka Aleya zanany vavy tamin'ny 2015. Natalie dia niteraka ny zanany fahatelo tamin'ny 30th of June, 2018 roa andro taorian'ny lalao tamin'ny lalao finday 2018 tany Angletera tany Kaliningrad. Nataon'i Fabian miverina any Angletera avy any Rosia mandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany mba hijoro vavolombelona amin'ny fahaterahan'ny zanany. Niverina tany Rosia izy taorian'ny fivoahana nahomby.
Ny tantaram-pianakavian'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Ny fiainan'ny tena manokana
Tamin'ny 23 December 2008, Delph dia nosamborin'ny polisy noho ny heloka.
Voampanga izy misotro toaka in Rothwell, Leeds, raha nitondra fiara tsy miverina tany an-tranony niaraka tamin'ireo namany efatra izy. Nahatsiaro ho meloka noho ny heloka vitany i Delph. Niangavy azy ho meloka izy tao amin'ny Fitsarana Leeds Magistrates ho fiampangana ny fiaramanidina haingana. Nosamborin'ny farany tamin'ny £ 1,400 izy ary tsy nahomby intsony tamin'ny fiara nandritra ny volana 18.
Ny fiavian'i Fabian Delph dia Guyane. Toy izany koa ny Ruben Loftus-Cheek.
Amin'ny tena izy, i Fabian Delph dia raim-pianakaviana mahafinaritra izay mahafantatra ny teknika amin'ny fampifaliana ireo zanany. Ity ambany ity ny sarin'ny dadatoavina mirehareha sy ny zanany vavy Aleya.
Ny tantaram-pianakavian'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Youth Summary
Nanomboka ny asany tao amin'ny baolina kitra i Delph fony izy mbola kely tany Bradford City. Delph dia nandao ny tanàna tamin'ny volana septambra 2001 mba hiditra ao amin'ny Leeds United rehefa nomena azy ny mpampiofana azy ho an'ny akademia izay nisy fiantraikany lehibe tamin'ny fanampiana ny fianakaviana Delph.
Nipoitra i Fabian ka tonga tany Tong Secondary School, izay nandao azy tamin'ny 2006. Herintaona taty aoriana, nisy olana ara-bola goavana teo amin'ny fianakavian'i Delph, momba ny vola hanohanana ny fianarany sy ny asany amin'ny lalao baolina kitra ao amin'ny Leeds United academy. Fotoana izao no nahatonga ny reniny tokan-tena niditra tao amin'ny fakam-panahin'ny hosoka.
Lucy Delph anefa dia nandeha tany amin'ny Leeds United Academy momba ny vatsim-pianarana. Nifangaro teo anelanelan'ny nilalao baolina kitra sy ny fianarana izy noho ny vatsim-pianaran'i Leeds. Tamin'ny taona 16 Delph dia namita ny fianarany tany amin'ny sekolin'ny mpiara-miasa tany Leeds, Boston School School.
Taorian'ny nitsanganany teo amin'ny laharam-piraisankinan'ny tanora, dia nahazo ny fifanarahana matihanina voalohany tamin'ny 11 Janoary 2008 i Delph. Tamin'ny Martsa 2009, ny fampisehoana nandritra ny vanim-potoanan'ny 2008-09 dia nahazo ny fanendrena an'i Delph ho an'ny mpilalao baolina kitra League One amin'ny taona. Ity fampisehoana ity dia nitarika an'i Aston Villa hikaroka ny asany. 6 taona vitsy taty aoriana dia hitany fa nilalao tao Manchester City izy. Ny sisa, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Fabian Delph momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.